अब मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरको सुरक्षा !!! – Ram Kumar Pariyar
Next कण्डम महँगिदा सहवासमा समस्या !!!
प्रविधि · २०७१ माघ २६ 0
अब मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरको सुरक्षा !!!
रामकुमार परियार |	२०७१ माघ २६
तर, प्रबिधिको जमानामा अब तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट निरन्तर घरको निगरानी राख्न
सक्नुहुन्छ र चोरी छिर्नासाथ प्रहरीलाई खवर गरेर
ठाउँको ठाउँ पक्राउ गराउन पनि सक्नुहुन्छ ।
मानिसका दैनिकीलाई सहज बनाउने गरी बिकाश भएका स्मार्टफोन एप्सले अब तपाईको घरलाई चौविसै घण्टा निगरानीमा राख्ने छ र तपाई जुनसुकै ठाउँमा भएपनि घरको लाइभ मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि सीसीटीभी क्यामेरा बनाइएको आइफोन नै चोरले चोरिदियो भने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन । किनकी खिचिएका तस्वीर एपले सर्भरमा स्टोर गर्छ र तपाईंले सजिलै चोरको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ ।यो एप एउटामात्र क्यामेरा प्रयोगको प्रयोजनलाई निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । यदि तपाईले एकभन्दा बढि क्यामेरा प्रयोग गर्नुहुन्छ र १२ घण्टाभन्दा बढिको भिडियो रेकर्ड स्टोर गर्न चाहानुहुन्छ भने पैसा तिर्नुपर्ने छ ।